Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan La Qaatay Guddoomiyeyaasha Xisbiyadda Iyo Guddiga Doorashooyinka Qaranka |
Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan La Qaatay Guddoomiyeyaasha Xisbiyadda Iyo Guddiga Doorashooyinka Qaranka
Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan La Qaatay Guddoomiyeyaasha Xisbiyadda Iyo Guddiga Doorashooyinka Iyo Nuxurka Uu Daarannaa
Hargaysa(TNN)Madaxweynaha JSL mudane Axmed Maxamed Silanyo ayaa maanta (19.01.2017) kulan muhiim ah la yeeshay Saddexda Gudoomiye-Musharrax ee Xisbiyada iyo todobada Xubnood ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Kulankaasi oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada, dhanka Xukuumada, waxa Madaxweynaha ku wehelinayey M/weynu-ku-xigeenka, Wasiirka iyo Wasiiru-Dawlaha Madaxtooyada, Afhayeenka iyo Xoghayaha gaarka ah ee Madaxweynaha.
Kulankan ujeedadiisu waxay ahayd in Madaxweynuhu Wada-tashi Qaran la yeesho Saddexda Gudoomiye-Musharrax ee Xisbiyada iyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka arrimaha la xidhiidha Taakulaynta Abaaraha baahsan ee dalka ka jira iyo sidii loo Maarayn lahaa ee loo meel-marin lahaa Doorashada Madaxtooyada ee inagu soo fool leh.
Madaxweynuhu JSL kadib markii uu si fiican u dhegaystay
isla markaana uu u dhuuxay doodii, aaraahdii, aragtiyihii iyo talooyinkii ay soo jeediyeen Saddexda Gudoomiye-Musharrax iyo Komishanka Doorashooyinka Qaranku hannaanka loo maaraynayo Labada Xaaladood ee is-barkan(Abaarta baahsan ee dalka ka jirta iyo qabsoomidda Doorashada Madaxtooyada); wuxuu madashii kulankaasi dhinacyada kala duwan u soo jeediyey hadallo luxdan oo dhaxal-gal ah oo salka ku haya Tudhaale Waayeel, Talo-wadaag, Tawfiiq iyo Taban-taabo Qaran.
1. Tartan caafimaadka qaba oo aan Turxaan lahayn:
Madaxweynuhu wuxuu ka hadlayey sida ay bulshadeenu maanta ugu baahan tahay Tartan caafimaadka qaba oo aan Turxaan lahayn wuxuuna Guddoomiyeyaasha (Musharraxiinta) Saddexda Xisbi Qaran ugu baaqay in ay la yimaadaan Tartan aan turxaan lahayn oo salka ku haya tudhaale bulsho, talo-wadaag, tawfiiq iyo inay mar walba u midoobaan halka ay ku jirto maslaxadda guud ee ummadeenu, taasoo ah tilmaamaha iyo tiirarka asaasiga ah ee lagu majeerto Jam. Somaliland.
Dhinaca kale, Madaxweyne Axmed Silanyo wuxuu aad u dhaliilay hadallada xanafta iyo xajiinta leh ee beryahan dambe warbaahinta ka socda kuwaasoo bulshada lagu kala qaybinayo, ama utun iyo arami lagu kala dhex dhigayo. Madaxweynuhu wuxuu Guddoomiyeyaasha (Musharraxiinta) Saddexda Xisbi Qaran ee uu tartanku ka dhexeeyo kula dardaarmay in ay ka fogaadaan kana feejignaadaan, isla markaana ay taageerayaashooda ka waaniyaan caadaysiga fal kasta iyo ficil kasta oo bulshada lagu kala qaybinayo.
2. Dib-u-dhaca ku yimi Doorashooyinka Madaxtooyada iyo Wakiillada:
Madaxweynuhu waxa kale oo uu kulankaa si mug leh ugaga hadlay dib-u-dhaca ku yimi Doorashooyinka Madaxtooyada iyo Wakiillada, taasina ay dhaawacday sumcaddii iyo karaamadii Jam. Somaliland ku lahayd guud ahaanba beesha caalamka, gaar ahaana saaxiibada badan ee inaga taageeri jiray nidaamka geedi socodka diimuqraadiyadda iyo doorashooyinka.
Dhinaca kale, Madaxweynuhu wuxuu tibaaxay in dib-u-dhaca ku yimi Doorashooyinka Madaxtooyada iyo Wakiillada ay buurtay tuhunno, is eedayn, aamin la’aan iyo kalsooni darro dhexdeenna ah. Taasoo ina gayeysiisay in xataa qaarkeen ay qaadacaan Go’aankii Golaha Guurtida ee muddo kordhinta, taas oo dhalisay in ay Maxkamadda Sare ee Dastuuriga ah ee Dalka, ka furteen dacwad ka dhan ah Go’aankii Aqalka Odayaasha.
Madaxweynuhu waxa kale oo uu kulankaa si waafiya u tibaaxay in aanay suurto gal ahayn in Doorashada Madaxtooyadu ay dhacdo waqtigii hore loogu qoondeeyey oo ah 28/03/2017-ka, taasina ay Qaran ahaan inagu tahay Caqabad Sharci oo adag oo u baahan in si farsamo ah loo maareeyo. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in marka laga tago Golaha Guurtida (oo leh awooddaDistooriga ah ee muddo kordhinta), haddii uu Doorashadu ku yimaaddo dib-u-dhac sababo la xidhiidha xagga farsamada ama aafooyin Qaran oo dabiici ah awgood, waxaa doorashada inagu soo fool leh dabar adag ku xidhay go’aankii ay soo saartay Maxkamadda Dastuuriga ee dalka ugu sarraysa. In qaraarkaa loo hogaansamaana waa waajib qaran oo aan la iska beddeli karin.
Madaxweynuhu wuxuu Guddoomiyeyaasha (Musharraxiinta) Saddexda Xisbi Qaran u bayaamiyey:
· Inuu arko in ay saddexdooduba ka midaysan yihiin in ay Dalka ka jirto abaar baahsan oo saamayn ku leh dad iyo duunyaba, taas oo inooga baahan gurmad culus.
· Inuu arko in ay saddexdooduba ka midaysan yihiin Muhiimadda ay leedahay qabyo tirka qaybinta kaadhadhka iyo qabsoomidda doorashadu.
· Inuu arko in ay saddexdooduba ka midaysan yihiin in ay adag tahay in doorashadu ku dhacdo xilligii loogu talo galay, xaaladda abaarta darteed.
· Inuu arko in ay saddexdooduba ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo maaraynayo ama la isu waafajinayo labadan xaaladood ee culus.
Dhinaca kale, Madaxweynuhu wuxuu sheegay in:
· Isagoo ka duulaya inuu daweeyo dareemmadii iyo dannigii ina kala galay;
· Isagoo fulinaya Go’aanii Golaha Guurtida iyo Qaraarkii Maxkamadda Sare;
· Isagoo maanka ku haya masuuliyadda isaga hoggaamiye ahaan ka saaran inuu dalka ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah;
Wuxuu Xukuumadda uu gadh-wadeenka ka yahay awaamiir adag ku siiyey in ay juhdi iyo dedaal badan geliyaan gudashada xilka kaga beegan meel marinta diiwaangelinta cod-bixiyaasha iyo qabsoomidda Doorashad Madaxtooyada.
3. Baahida loo qabo Qorshe dhammaystiran oo ka Turjumaya Xaaladda adag ee dalku ku sugan yahay:
Kulankii muhiimka ahaa ee uu Madaxweynuhu la yeeshay Saddexda Gudoomiye-Musharrax ee Xisbiyada iyo todobada Xubnood ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka, wuxuu hoosta ka xarriiqay inuu ka dheregsan yahay isla markaana uu garwaaqsan yahay duruufaha culus ee inagu gadaaman. Wuxuu sheegay inuu hogaamiye ahaan aad ugu damqanayo dadkiisa tabaalaysan, xukuumadiisuna itaal meel uu dhigaba aanay waxba la hadhi doonin sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu tabaaleeyeen. Madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay sida ay u damqayso ama ay dil ugu tahay in isaga muddo kordhin kale loo sameeyo. Sidaa darteedna ay isaga (Madaxweynaha) ka go’an tahay in uu dalkan doorasho xor iyo xalaal ah ka qabto idam EEBE.
Guntii iyo gunaanadkii, Madaxweynuhu isagoo ka duulaya kuna xisaabtamaya dhammaanba arrimaha iyo duruufaha sharci iyo kuwa dabiiciga ah ee kor ku xusan, wuxuu Guddida Doorashooyinka Qaranka faray in ay dib talo isugu noqdaan oo ay u soo gudbiyaan qorshe dhammaystiran oo ka turjumaya xaaladda adag ee dalku ku sugan yahay, kaas oo xaqiijinaya xilkii maamulka Doorashada ay qaranka masuulka uga ahaayeen.
Madaxweynuhu wuxuu Xubanaha Guddida Doorashooyinka Qaranka faray in talo bixintooda ay maanka ku hayaan arrimahan soo socda:
1. Dareemmada iyo doodda Hogamiyeyaasha Saddexda Xisbi Qaran.
2. Ilaalinta sumcadda iyo magac-samida Jamhuuriyadda Somaliland.
3. Xaaladda Abaarta ba’an ee Dalka ka jirta.
4. Sharciyadda Adag ee doorashadu salka ku hayso.
5. Tudhaalaha iyo taariikhda uu Madaxweyne ahaan u baahanahay.